I-Dreamy Beachfront Paradise Stunning View 1309 ♥ - I-Airbnb
I-Dreamy Beachfront Paradise Stunning View 1309 ♥
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Tommy And Randie
I-Majestic Beach Resort iyindawo enhle khona kanye ogwini lwesihlabathi esithambile esiyimpuphu eGulf of Mexico. Zibone ngeso lengqondo ushona elangeni, ubhukuda emanzini acwebile olwandle, futhi ubona izilwane zasolwandle zibhukuda eduze. Buka ukushona kwelanga okumangalisayo kuvulandi wethu oyimfihlo futhi omboziwe futhi ujabulele ukubukwa okumangalisayo okuvela ku-studio yethu kalula.
Singabanikazi abafanayo njenge-Dreamy Beachfront Paradise Stunning View 1312 e-Tower 1. Uma udinga ukuqashwa okwengeziwe, sicela uvakashele iyunithi yethu yesitudiyo 1312 noma ama-condo amakhulu, singajabula ukukunikeza izixhumanisi esicelweni sakho.
Kuyunithi yethu ephansi engu-1309 (isitezi se-13, i-Tower 1), uzothola umbhede wendlovukazi othokomele kanye nosofa othokomele onosayizi wendlovukazi odonsa umbhede nezinto zokulala ezifakiwe. Nethezeka kuvulandi ngokubuka kwemvelo noma ngokubuka kwe-TV yesikrini esiyisicaba. Zizwe ukhululekile ukuthola okuthile eziteshini ezingu-50+ noma ngena ngemvume ohlelweni lwakho lokusebenza lwemidiya oluyintandokazi ku-Roku. I-inthanethi ye-Wi-Fi esheshayo ye-5G ngeke idumaze uma ungathanda ukuhlola imilayezo noma ukuhlola iwebhu ngesikhathi sekhefu emisebenzini yangaphandle. Uma ukupheka kuwukuthokozela kwakho, ikhishi lethu elihlome ngokuphelele liphelele linesitofu esingu-4 esiphezulu, i-microwave, ihhavini, iwasha yezitsha, isiqandisi, i-blender, i-toaster, ikani/isivuli sebhodlela, umenzi wekhofi, nokunye. Sivame ukupheka futhi sidle e-condo ngakho-ke igcwele amagajethi amaningi okupheka, izitsha, nezitsha esingazidinga. Vele ulethe igrosa nempahla yakho. Ngemva kokuchitha usuku olude, hlanza endlini yethu yokugezela engusayizi ogcwele ngamathawula amasha nokomisa izinwele. Vele ulethe izinto zakho zokugeza eziyintandokazi nezinsiza. Ezinye izinsiza zihlanganisa ukushisa okuphakathi nendawo nesiphephetha-moya, indawo yokungena evikelwe ngekhodi ukuze kube nokuthula kwengqondo, eqhelelene nomgwaqo oheleza umoya kanye nemigwaqo ukuze kutholwe, kanye nombono omangalisayo ovela kuvulandi wethu wangasese.
I-TV engu- 52" ene-I-Roku, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
4.81 · 259 okushiwo abanye
Umakhelwane uhlukile ngoba kunemisebenzi eminingi eseduze nezitolo. Abaningi basendleleni yokuhamba, nokho, kuthule kunezinye izingxenye zePanama City Beach. Eminye yemisebenzi ozothola ukuthi uyenza ihlanganisa: ukuhamba ngesikebhe, ukubuka amahlengethwa, ukubhukuda namahlengethwa, ukubhukuda, ukutshuza emanzini, ukushushuluza emanzini, ukuntweza emanzini, i-eco-tours, ukugoqa ama-shelling, ukudoba olwandle, ukudoba olwandle olujulile, ukushushuluza ngendiza, ukuhamba ngesikebhe, ukuhamba ngezikebhe, ukuhamba ngezinyawo, iminyuziyamu, igalofu, igalofu elincane, amapaki emvelo, ukubhucungwa, ukuthenga, impilo yasebusuku, ithiyetha yamamuvi, ama-mazes amakhulu, amapaki okuzijabulisa, ichibi lokufuywa ama-stingray, ipharadesi lephazili yesayensi, amapaki amanzi, isihlilingi esikhulu, nokunye okuningi. Izinsiza eziseduze zifaka: amakhefi nezindawo zokudlela, izindawo zokudlela ezisuka kokujwayelekile kuya ezinhlelweni zokudlela, izitolo zegrosa, izitolo zokudla kwezempilo, izitolo zezingubo, izitolo zezidakamizwa, izitolo ezinkulu, amasonto, izitolo zezipho, nokunye okuningi. Ingxenye engcono kakhulu ibhishi. Inwebeka amamayela namamayela. Kunconywa ukuhamba ekuseni kakhulu ngoba abantu bebancane futhi nezilwane zasendle ziyinsada.
Ibungazwe ngu-Tommy And Randie
Sizotholakala uma unemibuzo mayelana ne-condo ngekholi yezwi, imiyalezo, noma intambo yomlayezo ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb. Uma uhlangabezana nesimo esiphuthumayo e-condo njengokuthi umoya ophakathi nendawo ungasebenzi, indlu yangasese ayishaywa umoya, njll., sicela usishayele kumafoni ethu.
Sizotholakala uma unemibuzo mayelana ne-condo ngekholi yezwi, imiyalezo, noma intambo yomlayezo ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb. Uma uhlangabezana nesimo esiphuthumayo e-condo njen…